Olee otú imelite LG G3 International na gam akporo 6.0 ukara femụwe | Gam akporosis
N'ime usoro nkuzi a ga - enyere m aka nke nkuzi vidiyo na - enyere m aka, m ga - egosi gị ụzọ ziri ezi nwelite LG G3 International na gam akporo 6.0 LG Official Firmware tinyegoro na Poland ụbọchị ole na ole gara aga.
Ọbụna ịbụ ngwa ngwa dị ka ule, nke a mmelite gọọmentị na gam akporo 6.0 Marshmallow maka ụdị LG G3 mba ma ọ bụ ụdị D855 na-arụ ọrụ zuru oke, nke mere na ọ bụ ngwa ngwa ọrụ m na-eji na LG G3 nke m ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izu ole na ole ugbu a. Mgbe ahụ, site na ịpị «Nọgidenụ na-agụ nke a post», M ga-agbakwunye faịlụ niile dị mkpa iji gbanye ngwa ngwa gọọmentị site na Ngwaọrụ Flash, yana ịkekọrịta KDZ gọọmentị na usoro ntinye ziri ezi na mmemme Flash Tools.
1 Ihe ndị achọrọ iji buru n'uche iji melite LG G3 mba ụwa na gam akporo 6.0 Marshmallow
2 Faịlụ dị mkpa iji melite LG G3 mba nlereanya ka Android 6.0 ukara LG
3 Etu ị ga-esi melite ihe ngosi LG G3 nke ụwa na gam akporo 6.0 LG
Ihe ndị achọrọ iji buru n'uche iji melite LG G3 mba ụwa na gam akporo 6.0 Marshmallow
Nwee LG G3 mba nlereanya D855 pụrụ iche na nanị.
Nwere USB debugging nyeere site na ntọala mmepe.
Nwere 100 x 100 batrị ebubo
Nwere ha Ndị ọkwọ ụgbọala LG arụnyere na kọmputa Windows gị nke ọma, dị irè maka Windows Vista, Windows 7, Windows 8 na Windows 10.
Faịlụ dị mkpa iji melite LG G3 mba nlereanya ka Android 6.0 ukara LG
Official Android 6.0 melite maka LG G3 mba na usoro KDZ maka Ngwaọrụ Flash site na ịpị ebe a.
Ngwaọrụ Dị Mkpa maka Icha: Ngwaọrụ Flash 2014, Anya C ++, LG Ọkwọ ụgbọala site na ịpị ebe a.
Ọ bụ ezie na Rom ma ọ bụ arụmọrụ femụwe gam akporo 6.0 Marshmallow maka LG G3 Ọ bụ ọkwa LG rom ma nwee ike itinye ya na ntinye dị mfe nke Flash Ngwaọrụ 2014 na ọnọdụ ntanetị, nke m chọrọ ịme usoro na ọnọdụ offline na-enweghị mkpa ijikọ sava LG. i kwesiri iso nkuzi a nke m kere n’oge gara aga ebe m kuziri gị ịwụnye Ngwaọrụ Flash ma gbanwee faịlụ dị mkpa ka ngwa Flashing na-arụ ọrụ na ọnọdụ offline.
N'otu aka ahụ, onye ọ bụla nke kpebiri ịgbaso nkuzi na ọnọdụ offline dị ka m mere na vidiyo na m ga-ahapụ n'okpuru usoro ndị a, nke Maka ihe ọ bụla n'ụwa ị ga-akwụsị mmemme na-egbu maramara ọbụlagodi na ọ na-agwa gị na ngwa ahụ akwụsịla ruo mgbe LG G3 amalitela kpamkpam.
Etu ị ga-esi melite ihe ngosi LG G3 nke ụwa na gam akporo 6.0 LG
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » Etu esi melite LG G3 International na gam akporo 6.0 Official LG Poland Firmware
Ihe 122 kwuru, hapụ nke gị
Ihe onyonyo Antonio Torres dijo
Mgbe onye ọrụ 6 ahụ rutere, ọ ga-emelite n'enweghị nsogbu?
Enwere ụzọ iji mee ya na kọmputa Mac?
Zaghachi Antonio Torres
Ndo maka nsogbu ahụ, enwere m G3 D885p nke ahụ bụ ụdị a na-ere na Mexico, ọ kwekọrọ na nke ị kwuru?
Zaghachi Mavin Yàñez
MB MB dijo
Mavin ị maara ma ọ bụrụ na D855p bụ otu ihe ahụ D855?
Zaghachi Juan MB
Ndewo, kedụ kedu, enyi m? Biko nyere m aka, enwere m ụdị lg g3 d855p nke a na-ere ugbu a na Ecuador, achọrọ m ịma ma ụdị a ọ dabara na sistemụ ị na-ebipụta, daalụ
Zaghachi Cristian ceron
Ndewo Marvin, lg anyị «d855p» bụ n'ezie ụdị ọkọlọtọ d855 ma ị nwere ike idozi ya site na iwepu batrị na smartphone. Enwere m ike ime mgbanwe rom ahụ n'enweghị nsogbu?
Zaghachi Josue Estrada
Nwoke a anaghị azaghachi ... O doro anya na ọ na-agbachi anyị gburugburu na ozi nke dị ka ihe dị mkpa nye ya .. Lee ihe ọ bụ!
Ndi lg g3 LS990 nsụgharị ga-enweta mmelite a? maka na ana m eche ya enwetaghị m ihe m ga-eji kọwaa ụdị ajụjụ a ebe ọ bụla
Zaghachi Antony Nuñez
Pff Emeela m ya ma awụchara m njehie n'akụkụ niile. mana amaghi m otu m si mechie windo njehie ma emelitere ya. Enwere m oge siri ike, anaghị m akwado ya ma ọlị.
Abiala m na windo nke LG Flasht tool to bag of ???? na vex nke akwụkwọ ozi nkịtị, na njehie njikọ ahụ nyekwara m, ezigbo yuyu ..
M awụnyere ndị ọkwọ ụgbọala ọzọ. Ọbá akwụkwọ VC ++ na njehie na-aga n'ihu. Ọ na-emelite m, mana mgbe m bidoro ọ na-agwa m na ọ nwebeghị ike ịmepe kọntaktị na njehie pụtara. Agbalịrị m na PC ọzọ na otu.
Enwere m d855 si Mexico na telcel m emelitere ya n'enweghị nsogbu, naanị nkọwa bụ njehie mgbe ị na-egwu vidiyo youtube na facebook dị nnọọ obere, malitegharịa ngwaọrụ ahụ, ihe ọ bụla ọzọ dị oke mmiri na batrị ahụ.
Zaghachi SHARK CP
Omar eze dijo
Enweghị m ike ibudata ihe ọ bụla na mbụ, ee, mana mgbe ahụ ọ gaghị eweda m ala, nke ahụ ọ bụ nkịtị?
Zaghachi Omar Rey
Omar, ị doziri ya?
Enwere m otu nsogbu ahụ na vidiyo facebook, mana ọ na-emekwa m mgbe ị na-egwu vidiyo ọ bụla na ibe ọ bụla, ọ dịghị mma na ihe ngwọta ya bụ ịmalitegharị ekwentị ka ọ bụrụ na mgbe obere oge otu ihe ahụ mere ọzọ, e kwesịrị inwe definitive ngwọta na m ya na m na-achọ ma ọ dịghị ihe m nwere ike ịhụ
Zaghachi camilo peña
Ihe niile zuru oke na ngwa ngwa.
Daalụ maka nkuzi ahụ, bara ezigbo uru = P
Anyasị, ọ bụ ngwa ngwa a maka LG G3 d851?
onye enyemaka dijo
H ARE ndị niile ụdị maka ugbu a ọ bụ naanị maka POLAND D855 http://lg-phone-firmware.com/
Zaghachi ka ọ ga
Ana m emelite sel m na gam akporo 6 mana akara 4g, 3g, na 2g dara ọtụtụ ihe.
Enwere m otu nsogbu ahụ, ị ​​nwetara ngwọta ọ bụla?
Achọrọ m ịma ma nsụgharị mba dị na Spanish, maọbụ ọ bụrụ na enwere ike ịhazi asụsụ.
Esi m Mexico
Ọ bụrụ na mgbaàmà ahụ ada, gbalịa ịwụnye modem 21c, budata ebe a, ya bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ inwe mgbake omenala:
Reply to onweed
N'ime usoro ndị a iji nwee ike ịme usoro na-adịghị n'ịntanetị, folda ahụ na LGMOBILAPK programdata apụtaghị, m kwesịrị ịbubata
Kedu ka m ga-esi tinye kdz na ekwentị na Mexico
Naanị m mere ya na LG G3 nke Argentine (D855AR). Maka ugbu a ihe niile na-arụ ọrụ zuru oke. Maka ndị nwere nchegbu, ana m agwa gị na enwere ike ịhazi ya n'asụsụ Spanish.
Kedu usoro ị ji mee ihe?
Hi Luis, m si Argentina.Mgbe ị na-amụnye ekwentị, ị kwesịrị ịkwụpụ pc na ịntanetị?
Ndewo enyi, a na m ajụ gị ajụjụ gbasara data mkpanaka gị maka na ọ bụghị nke m, ụdị a bụ d855ar
Ndewo, m si Argentina, emere m ya na 855ar, Akwụpụghị m ya mbubreyo 5min ije 10 isi
Ndewonu Luis. Have nwere 855ar ?? Mmelite ahụ ọ dị mma?
Ndewo, ana m agwa gị ebe m nwere lg G3 nke 16gb nke onwe, ọ ga-ejere m ozi rom nke poland nke gam akporo 6. M chere maka azịza ekele
Zaghachi Federico Ivan Vila
Enwere m ụdị d855p na m si Central America.Ọ ga-amasị m ịmara ma ọ bụrụ na mmadụ hụrụ ya na ụdị a ma ọ bụrụ na ha mere, ọ ga-arụ ọrụ data mkpanaka lte ma ọ bụ 4g
ọ bụ ihe ịga nke ọma !!
Emere m usoro ahụ ka ha dị na vidiyo ahụ ọ na-arụ ọrụ nke ọma na lg g3 D855p m ebe a na Central America, ihe niile na-arụ ọrụ zuru oke maka m gụnyere lte / 4g
Ọ na-adị ezigbo mmiri m na-akwado onye ọ bụla, site na ikike onye edemede m ga-eme ihe nkuzi ya na weebụsaịtị ọzọ ka e wee gbaa ndị ọzọ ume ka ha mee ya
Kevin, olee faịlụ ị budatara? Achọrọ m iji D855P m melite na marshmallow mana ahụrụ m faịlụ ndị dịnụ bụ V20A nke ga - abụ naanị Lollipop ...
Zaghachi René Eduardo Tino Gutiérrez
ọgụgụ isi ihe niile mechara bụrụ nke ọma !!!!!!!!!!!!!!!!
Zaghachi na zero.one.javier@gmail.com
Site na mgbe melite ga-enwe ike ime
Ọ rụrụ ọrụ zuru oke. Daalụ nke ukwuu. vidio a doro anya ma dịkwa mfe ịgbaso.
Na omimi miri emi dijo
Emelitere n'ụzọ ziri ezi na gam akporo 6.0 (Madrid, Spain). Ekwentị na-arụ ọrụ zuru oke na dịka a zụtara.
I meela ezigbo enyi!
Nabata Ahụ Ike nke Ọma
The nkuzi na-arụ ọrụ zuru oke !! Ma ebe ọ bụ na m melite m tufuru mgbaàmà ahụ nke ukwuu, ọ na-ewe ogologo oge iji jikọọ na netwọk data 2G, 3G ma ọ bụ LTE. Mgbe ụfọdụ ọ naghịdị ejikọ, azịza ọ bụla? ma ọ bụ usoro ịhapụ ya ọzọ na Lolipop?
Ọma emelitere gam akporo 6.0 (Misiones, Argentina). Ekwentị na-arụ ọrụ zuru oke na dịka a zụtara.
Ndewo Diego, ebe ọ bụ na ị nwere ike imelite, ị nwere ike ịgwa m ma ọ bụrụ na ejiri ndị a rụọ ọrụ (4g) nke Argentina? n'ihi na mba m g3 d 855 akabatabeghị maka netwọkụ 4g ebe a.
Eeh. 4g dị mma. O were m na-enweghị ejije. Have ga-arịọ site na ibe .. Emere m ya n'onwe m. Na ha na-ezitere m ozi iji hazie cell, data na ndị ọzọ. Nabata ozi ndị ahụ. Ma Malitegharịa ekwentị ahụ. Nsogbu adịghị. Batrị na-adịgide ọzọ dị ka mgbe ị zụrụ ya.
Diego nke gi bu lg g3 d855ar? Enwere m ụdị ahụ
Hi Diego, enwere m LG G3 D855AR, ihe niile ọ zuru oke? netwọk data? ị nwere ndị ọrụ?
Ndewo, nke mere na inwere 4g na Argentina, ị ga-emegherịrị ndị agha ahụ n'ihi na a na-eji ndị ọzọ.
M ga-ahapụrụ gị email m, dee m na m ga-agwa gị otu esi eme ya. Daalụ
Diego ma ọ bụ onye ọ bụla jiri D855AR mee ya, ụdị a ọ na-enweta FM FM ma ọ bụ ka anyị tufuo ngwa ahụ? Maka m ọ dị mkpa na ọ bụ ihe dugara m ịzụta ekwentị a B NOTGH another ọzọ n'elu nke nso nke ọnụ ọgụgụ ka ukwuu anaghị eweta.
Zaghachi Dieg Martín
debe redio yeah
Ndewo, onye ọ bụla maara otú ọ ga-esi gbanyụọ koodu ịkụ ọkpọ na gam akporo 6.0
Diego nke gi bu lg g3 d855ar? Enwere m ụdị ahụ.
Eeh. Ọ bụ otu ihe ahụ d855 ar
Daalụ. Emechaala m mechaa mebie ya. Ihe niile dịkwa mma
Enweghị m ike ime ya, achọpụtara m na e nweela nsogbu na nrụnye. Amaghị m ihe kọmputa m ga-enwe mana, dịka ọmụmaatụ, nhọrọ iji melite SW apụtabeghị ma ugbu a enweghị m ike imelite ya n'ụzọ a. a mmadu nwere ike inyere m aka?
Ndụmọdụ. Buru ụzọ tinye USB debugging mode na mgbe ị bụ x bido DOS file wụnye ndị ọkwọ ụgbọala ma nye ya nomas.
Daalụ maka ịza, nsogbu bụ na enweghị m ike ịbanye onye nrụpụta ọnọdụ, mgbe m pịa ya ugboro ugboro ọ na-agwa m "ọ dịghị mkpa, ị nweela onye nrụpụta"
Ga-aga nhazi na mgbe banyere ekwentị, ị pịa sọftụwia ihe ọmụma wee banye mkpokọta nọmba ị pịa 7 ugboro na ọ na-enyere ndị Mmepụta nhọrọ n banyere ekwentị. You na-enyere USB debugging. Ọ gwụla. Echere m na ọ baara gị uru.
Enweghị m ike, mgbe m pịrị ya enwere m "ọ dịghị mkpa, ị nweeworị onye nrụpụta" n'agbanyeghị ugboro ole m pịa ya 🙁 Daalụ maka azịza gị.
Nke ahụ bụ na i megoro ha eme, gaa na Ntọala na ala nke ihe niile ị nwere iji nweta ngalaba ọhụụ akpọrọ Nhọrọ Mmepe ma ọ bụ Ntọala dị elu.
Ndewo Francisco, agbalịrị m imelite ya ma tụba njehie, ọ gaghị ekwe m, kedụ ihe ọ ga-abụ? Daalụ
kedu ihe DOS
Zaghachi Haku Sama
ekwentị m bụ lg g3 d855p enwere ike itinye ụlọ a?
Aghọtara m na ee.
Ndewo, m mere ya na d855ar na enweghi nsogbu. 5 min mechara m gbalịa ime ya na d855ar ọzọ wee daa. Naanị ihe dị iche m na-ahụ bụ: 1 g3 enweghị ụlọ ọrụ na-agba lollipop. Nke abuo, nke dara ada site na movistar AR ma nwee KitKat. Echere m na ọ bụ n'ihi na KitKat na-ada ada. Ana m anwa ma biputere ọzọ iji gosi ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ nsogbu na mmelite ahụ dara. Ezigbo !!
Enwere m otu ụdị ahụ ewepụtara na movistar, emelitere ya site na kiktkat ruo loli tranki. site na LG PC SUITE na-enweghị nsogbu. Otu ahu ka m nwere olile anya na android 6. ekele.
Ndewo, a na m eche ihe na - eme gị. Tupu ịmalite usoro mmemme ahụ, wụnye ndị ọkwọ ụgbọala lg. Nke ahụ mere m na m wụnye druvers ọ gara n'enweghị nsogbu, naanị ihe pụtara na m karịa akwụkwọ ozi, akara ngosi ajụjụ niile, mana eleghara m ya anya na mgbe m mechara ihe niile, ọ dị mma.
Ndewo, ihe niile zuru oke, mana enwere m nsogbu na netwọkụ mkpanaka, ị nwere ngwọta ọ bụla? anaghị ejikọ ma ọ bụ were ogologo oge iji jikọọ na data mkpanaka.
Hi Javier, kedu netwọk ị nwere? KWESR??
Mba, ọ bụ AT&T Mexico
Ekele m nwere obere nsogbu, emere m usoro niile ị ga - agbaso na nke ọma, ụdị 6.0 arụnyere na enweghị nsogbu na ọdụ m mana mgbe m chọrọ iji igwefoto ahụ, otu onye anaghị arụ ọrụ ma ọ na - ezitere m njehie yana ọkụ anaghị arụ ọrụ ma. ma ọ bụ usoro ma ọ bụ ọnụ? .. Agbalịrị m ikpochapụ oghere nke ngwa ahụ na enweghị mgbanwe m mekwara nrụpụta nna ukwu na igwefoto ahụ ka dị otu, n'ikpeazụ, m kwara ya ọkụ ọzọ na otu nsogbu ahụ na-aga n'ihu , n'ikpeazụ, agbaghaala m ọdụ ahụ iji hụ ma ping nke igwefoto ahụ agbapụla na motherboard mana ụfọdụ ngwọta ka dị otu, ana m ekele gị nke ukwuu
Ọmarịcha, arụnyere ya dị ka akọwara, 100% arụ ọrụ… LG G3 D855P CLARO COLOMBIA…
hello luifer, ihe niile na-aga n'ihu? Achọrọ m ịkwaga na android 6, ị kwadoro ya
M arụnyere ihe niile nke ọma, naanị ihe na-ada ada bụ na igwefoto dị n'ihu anaghị amata m ma ọ bụ ịgbanwe igwefoto naanị onye na-azụ ya na-anọgide
Ndewo, Abụ m Gabriel, awụnyere ya na lg g3 d855 ọ na-arụ ọrụ zuru oke, mana akara ngosi data mkpanaka anaghị arụ ọrụ m, ya bụ, 3g na 4g n'ihi na ọ ga-arụ ọrụ ma m rụọ ọrụ ya ọzọ na ọ nweghị ihe mere, mgbe m wụnye ya, m gafere usoro dị ka akọwara
Dị ka m, olee otu ị si dozie nsogbu ahụ?
Zaghachi Roberto Castañeda
Aga m anwale ya ma kwuo maka etu o siri gaa, ekele si Paraguay
Ndewo, ọ dị m ịhapụ ịhapụ ekele m, maka nkuzi a m jisiri ike melite LG G3 D855AR na Marshmallow.
Ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma, na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Dabere na LG Argentina, ọ ga-ewe obere oge tupu Marshmallow abata na eze site na PC-Suite.
Ekele na ekele ọzọ.-
Alejandro, kedu ihe ọ na-aga, esikwa m na Argentina, achọrọ m inye mmelite m Lg G3 mana okwu a bụ na m na-atụ ụjọ na o nwere nsogbu ma ọ bụ ọdịda, ma 3G, 4G ... nke ahụ bụ ihe ọtụtụ anaghị agba m ume ime otú ahụ. Gwa m ntakịrị, kedu ka imere si melite? Kedu ụlọ ọrụ ị nwere?
Pocholo, kedu ka ị mere? M na-agwa gị na enweghị m nsogbu na nsogbu nke netwọkụ, ihe niile na-aga n'ihu dị ka ọ dị na mbụ. G3 m bụ n'efu ma jiri ya Claro.
Na mmelite ahụ, na mgbakwunye na ndozi interface, enwekwara nnukwu mmelite na arụmọrụ izugbe.
kedụ ebe i si budata ya?
Ndewo Nico, ihe niile ịchọrọ dị n’isiokwu a.
Naanị m wụnye gam akporo 6 na lg g3 m ma ugbu a ọ naghị ejikọta na pc suite, anyị maara ihe kpatara ya?
Ndewo enyi, ekele maka ịkekọrịta .. gbaa m ume ịgbanwe femụwe na ihe niile zuru oke .. M n'ezie na-amasị interface na ọhụrụ imewe ekele si Argentina (arụnyere na LG G3 D855AR) Daalụ GENIOOO ..
Ndewo ndị mmadụ, gbaghara amaghị ama, abụ m ọhụụ na isiokwu a, m si Argentina enwere m LG G3 D855 AR, yana Personal dị ka ụlọ ọrụ, jụọ: Amabeghị m emelitere na gam akporo 6.0 Marshmallow, anaghị m emetụ ihe ọ bụla aka, Echere m na enweghị m ya ma ọ bụ gbanye mgbọrọgwụ ma ọ bụ na-egbu maramara, enwere m ike ịme usoro a? Ma ọ bụ ka m ga-ebu ụzọ ọzọ, ekele
Ọ bụrụ na m melite na 6.0 ma ọ naghị arụ ọrụ nke ọma, enwere m ike ịlaghachi na 5.0?
Zaghachi Adrian Giraldo
Ndewo Adrian, ị maara ma ị nwere ike ịlaghachi na lollipop? Ọ ga-amasị m ịmata nke a tupu m agbasaa
Zaghachi Yanina Saba
Andrew AVILA dijo
Ndewo, LG G3 m bụ android 4.4.2 ma ọ gbanwere, enwere m ike ịme mmelite ọ bụla?
Zaghachi na ANDRES AVILA
Sọl minota dijo
Ndewo onye ọ bụla, melite na 6.0 ma ọ gara nke ọma mana data ahụ anaghị arụ ọrụ nke ọma, oge, na Virgin na ETB Colombia, ọ bụrụ na onye ọ bụla maara ngwọta ọ bụla, ana m ekele gị
Zaghachi na Saulo Minota
ị nwere ike imelite? n'ihi na m nọ n'ọnọdụ ahụ
Ekele m si na Mexico ma enwere m LG G3 STYLUS D693N Etu esi esi mgbọrọgwụ
Zaghachi ka ERICK
Ana Llely Hdez na -bụ mmadu dijo
Ndewo, m si Mexico ma enwere LG G3 D855P, agbam ume ka m melite gam akporo 6.0 Marshmallow, na mbido m tụrụ ụjọ na ọ ga-emebi ma ihe niile bụ ihe megidere, enwere m mmasị ka ihe niile si arụ ọrụ nke ọma, ọ bara uru na-ekwu na enweela m izu karịa 2 iji ya ma ọ nyeghị m nsogbu. Daalụ nke ukwuu maka ịkekọrịta ozi a.
Zaghachi Ana Llely Hdez
A gam achọ igbanye rom a, ana m atu egwu na netwok mkpanaka adighi aru oru, onye gwa m otu o siri gaa, ihe nlere bu d855ar, ekele
Imelitela ya, data ahụ agakwuru gị? M na-achọ imelite ma amaghị m
Ee, emelitere m ya ma ọ na-aga 1st, data mkpanaka niile zuru oke yana kwa batrị dị ogologo, emere m usoro a naanị na m họọrọ flash nkịtị ka ihe m ghara ihichapu
Ajuju, enwere m lg G3 D855AR si Argentina mana 16 gb otu, nke ahụ si na Poland ga-arụ ọrụ na ọdụ a? onye nwere ike inye m ndụmọdụ na nke a, nwere ekele.
Javier nke dijo
Ndewo Federico Ivan Vila, ọ bụrụ na ị were 2 nkeji iji gụọ ihe niile kwuru, ị ga-ahụ na e nweela ahụmịhe gara aga na D855AR, na ha niile na-aga nke ọma. Ndị niile nwara, nwee ekele maka nkuzi ahụ ma nye ya ikike na ọ na-eme ka arụmọrụ nke ekwentị ka mma yana na enweghị nsogbu na njikọ na netwọkụ. Echi mgbe m natara G3 ọhụrụ m, m ga - emelite.
Ana m akwado ka ị gụọ ihe niile mgbe ị na-ajụ ajụjụ.
Zaghachi Javier C.
Ajuju, maka ihe ngosi k?
Emere m ihe niile ma zuo oke mana nsogbu ahụ bilitere mgbe m gbalịrị ile Netflix. Ihe ọ bụla ị na-eyi ya dị oji. Ma na ngwa ma na weebụ! Fọdụ gwara m na ọ nwere ike ịbụ n'ihi DNS ebe ọ bụ na Poland enweghị Netflix mana amaghị m otu esi eme mgbanwe ahụ!
Ajuo m gi gini bu ihe anya? Gini na - eme ma oburu na m agbaghi ​​ya?
Ndewo, emelitere m D855AR m ma ọ naghị amata m, ọ na-amata netwọkụ, ya bụ, enweghị m mgbaama ọ bụla na mgbe m chọrọ ịgbanye ya ọzọ iji laghachite ụdị 5.0 lollipop m enweghị ike. Onwere onye ma ka esi gboo nsogbu ndia?.
Franco: Ka m gụrụ na post nke onye ọrụ ọzọ nwere otu nsogbu ahụ, ị ​​ga-abanye na akaụntụ gị na peeji nke onye na-eweta gị (www.personal.com.ar dịka ọmụmaatụ) wee rịọ ka e zitere gị nhazi netwọk site na SMS
Ndewo m chọrọ ịma ma LG G3 m dakọtara na mmelite ahụ. Ebe ọ bụ na nke m bụ nke a na-ere na Latin America Argentina. D855-AR.
Obinna 21 dijo
ị nwere ike imelite ya?
i nwere ike imelite ya eduardo?
Obinna 75 dijo
Onwe AR. LG G3 D855AR. Ọ na-arụ ọrụ ihe niile zuru oke na-enweghị nsogbu nsogbu ma ọ bụ ihe ọ bụla dị egwu. DABỌCH 2 GOBỌCH UP XNUMX TUPU NA Ọ NA-Arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi.
Zaghachi jalaway 75
Ndewo jalaway75 Achọrọ m ịjụ gị ma ị nwere ike ile Netflix anya nke ọma ma ị na-ahụ vidiyo ya? daalụ ihe ọ bụla biko zaghachi m mail matiasonboardarrobagmail.com
Tupu ịmalite mmelite maka D855-AR na CloudyG3 2.5, kedu usoro ndabere ị na-akwado maka data nke ngwa / mkparịta ụka / whatsapp / wdg?
Ezi ehihie ndị enyi m chọrọ enyemaka ngwa ngwa enwere m LG-D855P emelitere m ya na nke ikpeazụ gam akporo ihe niile na-agba ọsọ zuru oke Obi dị m ezigbo ụtọ ruo mgbe ndị enyi m gwara m na mgbe ha kpọrọ ekwentị m ọ na-ada ka ọ bụrụ na ọ na-apụ apụ anaghị m mara otu esi edozi nsogbu a mgbe m gbalịrị ịkpọ ụfọdụ oge ọ na - ewe oge ndị ọzọ ọ na - anọ na njikọta, gịnị ka m ga - eme?
Zaghachi Alejandro Espinosa
Mmasị, nkuzi ahụ nyeere m aka nke ukwuu, emere m ya ma ọ dị oke mma, nwee nnukwu ekele maka onye edemede achọrọ m imelite ya obere oge ma ọ nweghị onye nwere ike inyere m aka na ekele maka nkuzi a, agbalịrị m ime ya n'onwe m kwughachi ekele na-emenye ụjọ na-ede akwụkwọ
Zaghachi Sandro Ysabel Arraiza Llacsahuache
Onye ọ bụla nwere ụdị d855ar nwere otu nsogbu dị ka m banyere netflix ??? i nwere ike ihu ya nke oma ??? Daalụ, m na-eche azịza, ọ bụrụla oge nke atọ m jụrụ n'ime ọnwa atọ
Nzaghachi nye matias pepe
Ndewo, achọrọ m ịhapụ gị ozi m chọtara na XDA nke bịakwutere m dị ka pear n'ihi na ha ejighị netflix vidiyo na gam akporo M ma ọ bụrụ na mmadụ emee otu ihe ahụ,
usoro ị ga - agbaso dị mfe, naanị anyị kwesịrị ịgbanye mgbọrọgwụ ka ihichapụ faịlụ sistemụ dị na: / system / vendor / lib ihichapụ faịlụ liboemcrypto.so wee malitegharịa ma ọ na - arụ ọrụ.
maka ndi nwere otu nsogbu di ka mu!
Ebee ka ọ ga-ebudata ya? OO
Ndewo Juan Manuel. Kedu ihe ị chọrọ ibudata?
Ndewo, olee ụdị akọwapụtara iji budata nke si Poland, enwere m 3gb lg g855 d16, kedu nke m ga-ebudata?
Zaghachi Emanuel Teseira
Ndewo Francisco, good night.
Nke mbụ, ana m ekele gị maka ịkekọrịta nke a, ebe ọ bụ na ọ dịla anya m hapụrụ ịgbalị ịwụnye omenala ROM na d855AR na nke a bụ naanị otu m nwere ike iwunye ma ọ rụọ ọrụ zuru oke, ruo ụbọchị ole na ole gara aga.
Enwere m njehie nke na-adọta uche m na ọ bụ banyere Micro SD. Enwere m ya ebe m nwere ekwentị m na enweghị nsogbu ọ bụla, mana mgbe mmelite ahụ mgbe m na-ege egwu sitere na PlayerPro ebe nchekwa ahụ si na ya pụọ ​​site na mgbe ahụ agaghị m enwe ike iji ya. Ọ na-ewepu onwe ya mgbe niile mgbe m gbalịrị idetuo ihe n'ime ma ọ bụrụ na m nwalee ya na PC, ọ na-arụ ọrụ zuru oke. Agbalịrị m icheta ncheta ndị ọzọ nke nha dị iche iche (enwere m 32Gb otu na m gbalịrị 8Gb otu) na ekwentị ahụ na-enyocha mgbe m na-anwa ịbanye site na nhọrọ, na mgbe ụfọdụ ọ na-atụfu ozi ahụ «Ọ dị nwute, usoro com.android.settings akwụsịla. »
You nwere echiche idozi ya? Anọ m na-achọ ịntanetị ọtụtụ mana ọ nweghị ihe na-arụ ọrụ, gbanyere mgbọrọgwụ ya yana enwere m mgbake omenala nke ị kesara ma ọ gara nke ọma mana enweghị m ike idozi nke a site na Micro SD ma ọ na-ewute m nke ukwuu kemgbe M bi n'okporo ámá na egwu na-aghọ ihe dị ezigbo mkpa.
Ana m atụ anya azịza gị ma na-eche nzaghachi gị.
Daalụ n'ọdịnihu na ekele!
Ọ rụrụ ọrụ zuru oke, ihe na-erughị nkeji 10 ma emelitere, ekele !!
Zaghachi José Andrés Sanabria
Ezigbo, ị ga - emere m amara ịgwa m ihe ngosi nke microsd gị ma ọ bụrụ na ọ na - arụ ọrụ na - enweghị nsogbu? Enwetara m n'onwe m ebe ọ bụ na emelitere m. Nwekwara ike ịgwa m ma ọ bụrụ na Netflix na-arụ ọrụ maka gị? Ọ na-ana m ụgwọ ruo mgbe ebighi ebi ... na ha bụ nsogbu abụọ m na-enweghị na mbụ. Daalụ n'ọdịnihu!!!
Ana m eme usoro ahụ mana ọ bụghị mgbe m chọrọ ịhọrọ asụsụ ahụ oghere
Zaghachi jefferson andres
Kedu ihe m ga - eme iji mee ka asusu nile puta ebe o na - aputa oghere
Ihe niile zuru oke, ọ na-arụ ọrụ 100% ihe niile na-enweghị nsogbu na vidiyo na enweghị ihe.
Njikọ ahụ dị ala, ị gaghị enwe ike bulite ya ọzọ? Biko
Ezigbo enyi m, achọrọ m ịwụnye marshmallow. Kedu ihe dị iche na nke Polish a na nke ụwa? Daalụ n'ọdịnihu
Zaghachi Rubén alfonso
Chee na Parkour na gam akporo gị maka egwuregwu a na-enweghị atụ
A na - edozi ihe oyiyi ọhụrụ nke Xiaomi Mi5